समाज Archives - Page 178 of 190 - Dna Nepal
अघिल्लो जहाज रद्ध हुँदा दुर्घटनामा ज्यान गुमाए पोखराका सञ्जयले
पोखरा, फागुन ३० । पोखरा ६ जरेबरका सञ्जय पौडेल एमबीबीएसको अध्ययन सकेर नेपाल फर्कने क्रममा थिए । सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यूएस बंगला एयरको विमान दुर्घटना हुँदा उनी र उनका आफ्न्तका सपनाहरु पनि टुटे । सानै देखि साथी भाई र घरवरपर..
ट्रक दुर्घटनामा सडक विभागका दुई कर्मचारीको मृत्यु २९ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १४:५१
धनकुटा, फागुन २९ । धरानबाट एक्स्काभेटर लिएर धनकुटाका लागि छुटेको ट्रक पल्टिँदा २ जनाको ज्यान गएको छ । चारजना घाईते भएका छन् । साँगुरीगढी गाउँपालिका–९ कोशी राजमार्गस्थित घण्टेमा ना५ख १९३६ नंं को ट्रक सडकमा पल्टिँदा सडक विभागका दुई कर्मचारीको..
विमान दुर्घाटनामा ज्यान गुमाएका पोखराका पौडेल को हुन् ?
पोखरा, फागुन २९ । सोमबार दिउँसो काठमाडौमा भएको विमान दुर्घटनामा परि पोखराका एक जनाको ज्यान गएको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका ६ जरेवरका सञ्जय पौडेलको ज्यान गएको हो । युएस बंगला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा बंगलादेशस्थित जलालाबाद राजीव..
विमान दुर्घटना–विमानस्थलको गम्भीर लापरबाही (गोप्य सूचना कसरी बाहिरियो ?)
काठमाण्डौं, फागुन २९ । मंगलबार प्रकाशित सबै पत्रिकाहरुले त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा यूएस बंगालाको विमान दुर्घटना भएको समाचारलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् । सोमबार दिउँसो भएको दुर्घटनामा २२ नेपालीसहित ४९ जनाको..
BREAKING-घोडाघोडी नगरपालिकाका विवादित मेयरमाथि गोली प्रहार २८ फाल्गुन २०७४, सोमबार १६:३८
काठमाण्डौं, फागुन २८ । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरी गोली प्रहार भएको छ । उनलाई सोमबार साँझ मोटरसाइकलमा आएको अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरेको हो । प्रदेश नं. ७ प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी माधवप्रसाद नेपालले चौधरीलाई..
लायन्स शतवार्षिकमा राजेशदेखि रवीसम्म सम्मानीत २७ फाल्गुन २०७४, आईतवार ०२:४७
पोखरा, फागुन २७ । लायन्स क्लब अन्तराष्ट्रिय स्थापनाको १०० वर्ष पूरा भएको अवसरमा पोखरामा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका करिब १०० जना व्यक्तित्वलाई नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ । लायन्स क्लब इन्टरनेशनल ३२५ बी १ को आयोजनामा..
गण्डकी हस्पिटलमा सुत्केरीको मृत्यु, लापरबाहीको आरोप
पोखरा, फागुन २७ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल (गण्डकी) मा सुत्केरीको उपचारका क्रममा ज्यान गएको छ । कास्कीकै निर्मलपोखरीकी धनमाया पोख्रेलको आईतबार विहान ६ बजे ज्यान गएको हो । सुत्केरीको मृत्युपछि आफन्तजनले अस्पतालको लापरबाहीका कारण..
अचम्मको गाउँ-जहाँका किशोरी १५ बर्षमै आमा बन्छन् २६ फाल्गुन २०७४, शनिबार १२:३६
प्रकाश ढकाल (भुजेलगाउँ) तनहुँ, फागुन २६ । उमेर १८ । २ बर्षअघि बिहे । काखमा ६ महिनाकी छोरी । तनहूँ बन्दिपुर गाउँपालिका ५ भुजेल गाउँकी उषा भुजेलले १६ बर्ष नपुग्दै विहे गरिन् । ७ कक्षा पढ्दै गर्दा अल्छि मानेर पढाई छोडेकी उनलाई आमाबाबुले नै फकाएर विहे..